Archive du 20170617
Votsotra ny alakamisy lasa teo ilay teratany karana Pradeep Chandarana, nisy naka an-keriny teny Behoririka ny alarobia 7 jona teo. Tsy fantatra mazava izay fepetra sy fifanarahan'ny fianakaviany sy ireo mpaka an-keriny ka nahavotsotra azy.
Leader Fanilo mpanohitra Miantso ny vahoaka hitroatra
Nampahafantarin’ny antoko Leader Fanilo elatra Rabesa Zafera Antoine tetsy Antaninandro omaly fa nanapa-kevitra ny hiditra ao anatin’ilay
Taratasin’i Jean Iza ary no hihaino eo ?
Miarahaba Jean a ! Midera ny fahasahianao omaly aloha izahay fa dingana lehibe iny vitanao iny e ! Tena efa avo be mihitsy anie le antsonareo teo e ! Izahay indray ity no raiki-tahotra.
KMF/CNOE Manakiana mafy ny foloalindahy
Henjana ny fanehoan-kevitry ny Firaisamonim-pirenena KMF/CNOE miantefa amin’ny mpitandro ny filaminana. “Mbola mitana ny andraikitra napetraky ny lalàna taminy ve ireo foloalindahy ?”, hoy izy ireo.
Rakotomanana Honoré Nihaona tamin’ny solontenan’ny FNUAP
Boriborintany Fahenina Tsy hatao tompon-trano mihono ny vahoaka
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly teny Ambohimanarina, haharitra roa andro, ilay hetsika varavarana misokatra karakarain’ny Boriborintany fahenina, entina hampahafantarana ny faritra misy azy.
Rotary Club Antananarivo Doyen Nanome kopia ankizy 2500
Mitohy hatrany ny hetsika tanterahin’ny Fikambanana Rotary Club Antananarivo Doyen amin’ny fanomezana kopia mari-pahaterahana ireo ankizy tsy mbola manana eto amintsika.